Yangon City Myanmar ﻿	﻿
Myanmar SEADRM Project
Invitation For Expressions of Interest (EOI)For Development of Industrial Park With Essential Ancillary Infrastructure In New Urban Development of YGN
ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ဝယ်ဈေး - ၁၈၅၀ ကျပ်
Got to seealist of recent calls, the One Stop Service Token No. in the hall
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကျောက်တံတား၊ ပန်းပဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်များရှိ ရေသုံးစွဲသူပြည်သူများအနေဖြင့် ရေဖိုးရေခပြေစာများအား My City Application အသုံးပြု၍ AYA Pay. CB Pay, KBZ Pay, UAB Bank Sai Sai Pay, AGD Bank One Pay, Wave Money, My Tel, OK$ တို့မှ ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကျောက်တံတား၊ ပန်းပဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်နှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်များရှိ ရေသုံးစွဲသူပြည်သူများအနေဖြင့် ရေဖိုးရေခပြေစာများအား My City Application အသုံးပြု၍ AYA Pay. CB Pay, KBZ Pay, UAB Bank Sai Sai Pay, AGD Bank One Pay, Wave Money, My Tel, OK$ တို့မှ ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်သည့် အဆောက်အဦများ၏ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထား ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှ ကန့်သတ်ခွင့်ပြုထားသော နောက်ဆက်တွဲပါလုပ်ငန်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီက စိစစ်ထုတ်ပြန်ထားသော (Water Supply & Sanitation) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားပြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကာလများနှင့် ကိုက်ညီစွာ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်သည့် P.E(Water & Sanitation), R.S.E(Water & Sanitation), R.E(Water & Sanitation)များမှ ၁-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစတင်၍ တာဝန်ယူလက်မှတ် ရေးထိုးလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရာပြတ်ဌာနမှ စည်းကြပ်ကောက်ခံလျက်ရှိသော ပစ္စည်းခွန်များအား ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ကုန်သည်လမ်း(ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းနှင့် ၄၅-လမ်းကြား)၊ ၁၂ထပ်ခွဲရုံး၊ ၁၂-လွှာရှိ ရုံးချုပ်တွင် အခွန်ငွေပေးသွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ပေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့် အင်းစိန်မြို့နယ်တို့ရှိ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် ရာပြတ်ဌာနရုံးခွဲများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပြီး မြေနှင့်အဆောက်အအုံများအပေါ် စည်းကြပ်သည့်ပစ္စည်းခွန်များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၈-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၈-၆-၂၀၂၂)နှင့်(၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
© Copyright. All Rights Reserved by ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ